Warning: session_start(): open(/opt/alt/php73/var/lib/php/session/sess_3515b818ab65abb2cf64abc7d7ccd190, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/vsabba/public_html/somaale.com/wp-content/themes/News/functions/filters.php on line 5
Maleeshiyada Shabaab oo ciidamo looga Dilay Dagaal Ka dhacay Duleedka Baledweyne | Somaale.com
Maleeshiyada Shabaab oo ciidamo looga Dilay Dagaal Ka dhacay Duleedka Baledweyne
Galinkii dambe ee maanta ayaa dagaal xoogan oo gaystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa uu Ciidamada Maamulka Dooxada Shabelle iyo Xarakada Al Shabaab ku dhexmaray duleedka Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa la tilmaamay in uu bilowday kadib markii Ciidamo ka tirsan Maamulka Dooxada Shabelle ay weerar qorshaysan ku qaadeen fariisimo Ciidamada Shabaabku ay ku lahaayeen duleedka Magaalada Baladweyne, iyadoo halkaasi uu ka dhashay qasaaro la tilmaamay in uu dhinacyadaasi soo kala gaaray.
Wasiirka Warfaafinta ee Maamulka Dooxada Shabelle Max’ed Nuur Cago-joof oo la hadlay saxaafada ayaa waxaa uu sheegay in dagaalka ay qaadeen Ciidamadoodu, Shabaabna ay ka dileen ilaa 4-dagaalyahan, wuxuuna carabka ku dhuftay inay kaa biga ku hayaan degmada Baladweyne gobolka Hiiraan.
Max’ed Nuur Caga-joof ayaa tilmaamay in dhankooda uu ka geeriyooday labo ruux, isagoo tilmaamay in iminka ay gacanta ku hayaan duleedka degmada Baladweyne oo ay weerarka ku qaaeen Ciidamadaasi.
Dadka deegaanka ah oo la hadlay saxaafada gudaha ayaa sheegay in dhahoodu ay ku arkeen dhimashada ilaa 3-ruux oo la tilmaamay inay ahaayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuwaasi oo haleeshay rasaasta ay dhinacyadaasi is weedaarsanayeen.
Wax war ah kama soo bixin maleeshiyada Al Shabaab ee gobolka Hiiraan oo ku aadan dagaalkaasi, hase ahaatee xaaladdu ayaa lagu soo waramayaa in haatan ay tahay mid kacsan islamarkaana mar waliba halkaasi laga filan karo dagaal mar kale dhexmara dhinacyadaasi.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ka Baqa Cararay Degmada Ceelbuur iyo deegaano kale oo Gobolka Galgaduud ah. (Warbixin dheer) 0
Koonfur galbeed oo dooratay madaxweyne
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo Laga kala Cararayo, waayo Beesha Noqota Guddoomiye waxay waayeysaa Ra’iisul-Wasaare ama Madaxweyne 0